Waa sidee nolosha dadkii ka badbaaday EBOLA afar sano ka dib?
Waxaa laga jooga muddo afar sano ah tan iyo markii uu cudurka virus-ka ee Ebola uu ka dillaacay waddamada Galbeedka Afrika sida Liberia, Guinea iyo Sierra Leone. Sawirqaade lagu magacaabo Hugh Kinsella ayaa dib ugu laabtay waddamadaasi kana soo uruuriyey warbixinno dadka wali la nool cudurkaasi.
Sanado kadib dowladda ayaa magdhaw siisay taas oo u oggolaatay in afar carruur ah iskuul u dirto.
Rita Carol waxay walaasheed ku weysay cudurka Ebola, waxay cuntada ku gadi jirtay jidadka ku yaalla magaalada West Point ,balse waxay keydsatay lacag ku filan waxayna soo gadatay firinjeer waxayna bilawday shaqo cusub oo ay ku gadayso jallaato,iyadoo rajeynaysa nolol wanaagsan iyo waayaha mustaqbalkeeda.
Etta Roberts waa kalkaaliso ka shaqo gasho isbitaalka Kahweh, waa xarun caafimaad oo ku taalla bariga Monrovia. Waxayna daaweysa ugu yaraan 10 qof oo bukaan ah oo la jirran malaariya
Aasaasaha isbitaalkan oo lagu magacaabo, Reginald Kahweh, ayaa hergaliyey qarashka lagu dhisay xaruntaan kadib markii uu ku waayey labaddisii waalid cudurka Ebola," qof kasto waa inuu u istaaga asaasidda bulsha wanaagsan....xaruntaan waxaa loo sameyey in lagu xasuusto dadkii dhintay."
Ebola oo dib ugu soo laabtey Africa, dadna ku dilay Congo
Caalamka 11.05.2018. 16:25
Dalalka ku yaalla galbeedka Africa ayaa waxay cabsi ka qabaan in cudurka uu ku faafiyo markale...